कमला घिमिरेको तीज गीत भयो भाइरल, तोड्यो अहिले सम्मकै रेकर्ड (भिडियो सहित)
July 19, 2020 4875
पछिल्लो समयको सांगितिक ब’जारमा नेपाली लोक गित संगित चर्चा परिचर्चामा रहेको छ । समस्त लोक दोहोरी गित सबै दर्शक स्रोताको नजरमा लोक:प्रिय भन्दै गएका छन् । क’ति गितहरुले त करोड क्लव प्रवेश गरिसकेका छन् त कति गर्ने बालामा छन् ।
यसै सन्दर्भ बजारमा धेरै सर्ज:कले आफ्नो गित दर्शक स्रोतामा पठाएका र कयौ माया :पाएका छन् लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर गीतहरु आउनेक्रम बढेको छ । मायाप्रेम र बिछोडले भरिएका गीतहरु दैनिक:जसो बजारमा आईरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भ बजारमा धेरै सर्जकले आफ्नो गित दर्शक स्रोतामा पठाएका र कयौ माया पाएका छन् । लो’क तथा दोहोरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय एकपछि अ’र्को गरेर गीतहरु आउनेक्रम बढेको छ । मायाप्रेम र बिछोडले भरिएका गीतहरु दैनिकजसो बजारमा आईर’हेका छन् ।
त्यसो त रमाईला, नचाउने किसीमका गीतहरुपनि बजा’रमा आईरहेका छन् तर बढिजसो माया’प्रेमका गीत’हरु आउने गर्छन् कारण यस्ता गीतलाई दर्शकश्रोताले रुचाउछन् ।
नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा एकपछी अर्को गर्दै निकै उत्कृष्ट गीत संगीत बजारमा आइरहेका छन् । सोहि क्रममा क’हिले सांगितिक बजारमा तिजका गित , कहिले दशै तिहार त कहिले चाडपर्व विशेष गित हरु बजारमा आईरहेको छ ।
सोहि :क्रममा तिज पनि नजिकिदै छ । कलाकारहरुले चेलिको पिर व्यथा , समसामयिक घटनालाई समेटेर तिज गित बजारमा पठाईएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा सामाजिक संन्जा’लमा भाईरल बाल गायिका कमला घिमिरेको र लोक प्रिय गायक सर्जक खेम सेन्चुरिको आवाजमा रहेको सम्भु कुवरको तिज गित “लरिलरि लै” भखरै सं’सारभर सार्वजनिक भएको छ ।
गित संगीत क्षेत्रमा निरन्तर अगा’डि बढिरहेका गायक तथा सर्जक खेम सेन्चुरी दिनप्रति दिन चर्चामा आउन सफल भयका छन्उनके। उनले अहिले सम्म थुप्रै गित संगीत’हरु मा आफ्नो स्वर संगीत’ दिइ सकेका छन् ।
थुप्रै गितबाट नाम कमाउन सफल सेन्चुरी यसपा’ली तीजमा पनि फरक तिज गित बजारमा सार्बज’निक गरेका छन्।
भाइरल बाल गायि:का कमला घिमिरे र गायक खेम सेन्चुरी को सुमधुर आवाजमा प्रतिभाशालि कलाकार नेत्र अर्याल:को उत्कृष्ट शब्द सिर्जनामा उनी बहुप्रतिभाशाली सर्ज:क खेम सेन्चुरी को लय सिर्जनामा शुभारम्भा डिजिटलको २०७७ सालको तिज गित लरी: लरी लै रुन्छु बरिलै बजारमा सार्बजनिक भयको छ।
सुरेश श्रेष्ठ को छायां:कनमा चर्चित निर्देशक प्रकाश भट्ट को उत्क्रिष्ट निर्देशनमा बिष्णु शर्मा को सम्पा:दन रहे:को छ भने खेम सेन्चुरी /सरस्वति फुया:ल र कमला घिमिरेको अभिनय रहेको छ। उक्त गीतलाई शुभारम्भा डिजिटलको आधिका:रिक युटुब च्याअनल मार्फत बजारमा सार्बजनिक गरियको छ।
Prevटिकटकमा भेटिइन साम्राज्ञि जस्तै युवती, को हुन उनी ? हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Nextसमिक्षा अधिकारीको एकल स्वरमा नयाँ चर्चित गित “आमाको काख” (भिडियो सहित..हेर्नुहोस्)
एकै परिवारका ९ जनाको पहिरो’मा पुरिएर मृ’त्यु , दागबत्ती दिनेसमेत कोहि भएन!
‘१६ वर्षको केटाले